शालिकरामले मर्ने धम्की दिएर अस्मितालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएको खुलासा, यस्तो छ प्रेम कहानीको नाटक - Everest Dainik - News from Nepal
शालिकरामले मर्ने धम्की दिएर अस्मितालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएको खुलासा, यस्तो छ प्रेम कहानीको नाटक
काठमाडौं । साउन ११ गते वसुन्धराको ग्रिनसिटी अस्पताल भर्ना गरिएकी नीलकुमारीलाई २४ गते थप उपचारका निम्ति टिचिङ अस्पताल सारियो । चिकित्सकहरूले उनलाई निमोनियाँ बिग्रिएको बताएका छन् ।
आठ सन्तानमध्येका माइँला छोरा जगत झन्डै एक महिनायता उनको हेरचाहमा खटिएको खटियै छन् । अस्पताल भर्ना भएकै दिनदेखि नियमित कुरुवा बस्दै आएकी अस्मिता भने पछिल्ला आठ दिनयता बिरामी आमा भेट्न अस्पतालसम्म जान पाएकी छैनन् । पाऊन् पनि कसरी रु हठात् आइपरेको अनौठो परिस्थितिको बन्धनमा परेकी अस्मिता साउन ३० यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको थुनुवा कक्षमा छिन् ।
अस्मिताका नजिकका साथी, उनी कार्यरत अस्पतालका सहकर्मी, उनका दाइ र अस्मितासँग कुराकानी गरेकी अधिवक्तासँग गरेको कुराकानीबाट उनीहरूको सम्बन्धबारे सञ्चारकर्मी रवि पूर्णजानकार देखिँदैनन् । ‘रविसँग न कहिल्यै अस्मिताको कुरा भएको देखिन्छ, न उनीहरूबीच चिनापर्ची नै देखिन्छ,’ अधिवक्ता फूलमायाले अस्मितालाई उद्धृत गर्दै भनिन् ।
त्यसो त शुक्रबार मात्रै पत्रकार टेकनारायण भट्टराईमार्फत बाहिरिएको रविको अडियो अन्तर्वार्तामा पनि उनले अस्मितासँग युवराज र आफ्नो पहिला कुनै चिनाजानी नभएको, फोन र कुनै माध्यमबाट संवाद नभएको दाबी गरेका छन् । शालिकराम विवाहित रहेको थाहा पाएपछि पनि शालिकरामले बारम्बार मानसिक तनाव दिन थालेपछि अस्मिताले सम्बन्धबाट छुटकारा मिलाइदिन रविले प्रयास गरिदिए हुने भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । अस्मिताले न्युज२४ मा कार्यरत केही पत्रकारलाई भेटेरै शालिकरामबारे कुरा राखेको र समस्या समाधान निम्ति पहल गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।
आमाको उपचारका निम्ति अस्मिता ग्रिनसिटी अस्पतालमा रहेका बेला न्युज२४ कै पत्रकार बताउने केहीले आफूहरू अस्पताल बाहिर रहेको र थोरै भए पनि कुरा राखिदिन भन्दै बारम्बार आग्रह गरेका थिए । शालिकरामको आत्महत्यापछि किन न्युज२४ ले बारम्बार अस्मिताको अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो ? के त्यसमा रविको कुनै भूमिका थियो? यसबारे भने केही तथ्य खुलेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।